सन् १९७२ पछि किन चन्द्रमामा मान्छे गएका छैनन् ?::local sandesh
लोकल संदेश / शनि, पुस १, २०७४
सबैभन्दा पछिल्लोपटक सन् १९७२ मा युजिन सेरनन चन्द्रमामा पुगे । युजिन पछि कोहीपनि चन्द्रमामा गएको छैन । आखिर किन यो पछिल्लो ४५ वर्षमा मानिसहरु चन्द्रमामा गएका छैनन् ?
मंगल ग्रह तथा अन्य धेरै ग्रहको खोजमा लागिरहँदा किन अमेरिका लगायतका देशहरु यति लामो समय चन्द्रमामा मानिस पठाउने कुरातर्फ किन लागेनन् रु धेरैको मनमा यो प्रश्न रहेको छ ।
सन् २००४ मा अमेरिकाका तत्कालिन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले ट्रम्पले नै जस्तै गरी चन्द्रमामा मानवयान पठाउने मिसनको प्रस्ताव गरेका थिए । यसमा १ अर्ब ४ अर्ब अमेरिकी डलरको अनुमानित बजेट बनाइएको थियो । तर त्यो विशाल बजेटका कारण चन्द्रमामा मानिस पठाउने परियोजना त्यसै तुहियो ।
यी योजना कम खर्चिला प्रविधि तथा स्पेसक्राफ्टको निर्माणमा आधारित छन् । चीनले सन् २०१८ सम्म र रुसले सन् २०३१ सम्म चन्द्रमामा प’ने योजना बनाएका छन् । कतिपय प्राइभेट कम्पनीहरुले अन्तरीक्षको बिजनेस मोडेल ल्याउने कुरा गरिरहेका छन् ।
जसमा चन्द्रमामा खनिजको उत्खनन गर्ने चन्द्रमाबाट ल्याएका पत्थर बहुमूल्यमा बेच्ने योजना समेत छन् ।
यी दौडमा अमेरिका पछि रहन चाहँदैन । नासाको योजनाका लागि यो पटक विनियोजित बजेट अमेरिकाको कुल बजेटको १ प्रतिशत रहेको छ । जबकी अघिल्ला अन्तरीक्ष कार्यक्रमका लागि यसको ५ प्रतिशत थियो । (बीबीसी)